Dhaabbileen Chaayinaa dubartootaaf boqonnaa itti dhirsa barbaadan kennaa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Dhaabbileen Chaayinaa dubartootaaf boqonnaa itti dhirsa barbaadan kennaa jiru
Goodayyaa suuraa Motummaan Chaayinaa dubartoonni akka heerumanii dhala godhataniif jajjabeessaa jira.
Fira gaafachuuf, bashannanuuf, dhimma raawwachuuf ykn dowwannaa taasisuuf bakka hojiitii boqonnaa baatu ta'a. Garuu michuu barbaachaaf boqonnaa baatanii beektu laata? Eenyutu beeka tarii fudhattaniirtu ta'a.
Chaayinaatti namoonni miliyoonaan lakkaa'aman tibba bara haaraatti maatii isaanii gaafachuuf jecha boqonnaa ba'u.
Haa ta'u malee mindeeffamtoonni dubartootaa gaahiila hindhaabatiinii fi kanneen umurii 30 keessatti argaman ammoo dabalataan carraa hayyama guyyoota 8 ni argatu.
'Maaliif isaan kunneen qofti fayyadamoo ta'an?' jechuun gaafachuu maltu. Carraan kunis jaalallee argachuu akka danda'aniif yeroo akka argatan yaadameeti.
Akka maddi oduu Kibba Chaayinaatti argame tokko mul'iseetti, dhaabbileen biyyattiitti argaman lama hojjattoonni shamarranii akka jaalallee barbaadaniif heeyyama kennaniiru.
Kanaan walqabatees manni barnootaa magaalichatti argamu tokkos barsiiftoonni dubartootaa isaa hinheerumiin jaalallee akka barbaadataniif, 'heeyyama jaallallee' kenneeraaf.
Biyya Chaayinaatti shamarran umuriin dhuma waggaa 20n keessatti argamaniifi hin heerumiin 'kan dhaabbatanii hafan' jedhamu. Kunis cimuudhaan baayyeen hojiirratti cichuun osoo hin heerumiin hafuun baayyataafi filatamaa dhufaa jira.
Dhimmi dubartoonni osoo hinheerumiin hafuunsaanii yaachisaa ta'eera. Mootummaan biyyattiis baayyina ummataa hir'achaa dhufeefi hir'achuun humna omishaa yaaddoo itti umaa dhufaa jira.
Kanaafuu dubartoonni heerumuun daa'ima akka godhataniif jajjabeessaa jiru.
Haa ta'u malee qo'annoon damee kanaa ilaalchi Chaayinaa keessatti dubartoota umuriinsaanii dhuma waggaa 20n irratti argamanii dogongoraa ta'uu amanu.
Barreessituun biyyattii Leetaa Hoongi Fiinchar BBC'tti akka himteetti, mootummaan keessumattuu dubartoonni baratan akka gaa'ila dhaabachuun dhala godhataniif jajjabeessaa jira jette jirti.
Erga waggaa afuriin as 'imaammanni mucaa tokkoo' ka'een booda, haalli dahumsaa gadi bu'aa dhufeera. Lakkoofsi namoota gaa'ila dhaabbataniis akkasumas waggoota jahaan as hir'achaa dhufeera.
Bara darbe keessa dhalli daa'imman miliyoona 15 kan galmeeffame yoo ta'u, kuni waggoota duraa wajjin walibiratti yoo ilaalamu miiliyoona lamaan gadi bu'eera.
Barreessituun kunis imaamatamucaa tokkichaa biyyattiin hordofaa turtee fi barmaatileen mucaan dhiiraa dahuu jajabeessa ture akka saalli wal madaalli dhabuuf gumaatu himti.
Daa'imman Chaayinaa albeedhaan haleelaman
Daa'ima erga maatiinsaa du'anii waggaa afur booda dhalate
''Wayita ammaatti biyyattii keessatti hirinni dubartootaa umameera. Akka gabaasa motummaatti baayyinni dhiiraa kan dubatootaa %30n caala,'' jetti.
Akaadaamiin saayinsii Chaayinaa keessatti argamu akka beeksiseettis, waggoota itt aanaan 50 keessatti baayyinni ummataa miliyoona 1.4 irraa gara miliyoona 1.2tti akka hir'atu mul'isa.
Kunis dinagdee fi haawaasummaa biyyattiitti rakkina umuu mala jechuun yaaddoo umeera.
Qaamni kiyyaa kan bitaa eessatti argamaa?
Sochiin dubartoonni akka jaalallee barbaadachuun dhala aragatan dandeessisuuf heeyyamni keennamuu isaa hangam rakkinicha akka hir'isu ifatti beekamu baatulleen, bulchiitoonni humna namaa tokko tokkoo ammoo bu'aa qabaachu isaa himaa jiru.
Biyyattiitti Bulchiinsa dhaabbata tokkoo kan ta'e Mr Shuwaangi Lii ''Walitti dhufeenyi dubartoonni tokko tokko addunyaa alaa waliin qaban murtaa'adha. Kanaafuu dubartootaaf heeyyama dabalataa kennuun akka jaalallee waliin quunnamtii ummatan cimsataniif carraa keennu ni danda'a,'' jechuun yaada kennaniiru.
Boqonnaan dabalataa kunis hojjattoota biratti fudhatama argachusaa dabalanii himaniiru Mr Shuwaangi Lii.
Chaayinaatti oolmaa daa'immanii allbeedhaan haleelame
Chaayinaatti maatiinisaa erga du'anii waggaa afur booda daa'ima dhalate
Baqataa Niijer jireenya isaa buufata xiyyaaraa Boolee godhate